जलविद्युत्को शेयर निष्कासन निर्देशिका | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय जलविद्युत्को शेयर निष्कासन निर्देशिका
on: June 17, 2019 सम्पादकीय
विद्युत् नियमन आयोगले तयार पारेको ‘विद्युत् सम्बन्धी कम्पनी वा संस्थाहरूको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी प्रस्तावित निर्देशिका २०७६’ का केही प्रावधानप्रति निजीक्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू विशिष्ट प्रकृतिका हुन्छन् । त्यसो हुँदा शुरूमा अनुमान गरिएको भन्दा बढी लागत लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा थप लगानी जुटाउन निर्देशिकाले रोकेको छ । केही प्रवर्द्धकहरूले गर्न सक्ने बेइमानी रोक्न शेयरको सार्वजनिक निष्कासनमा कडाइ गर्न आवश्यक भए पनि आयोजना नै सम्पन्न हुन नसक्ने गरी पूँजी उठाउने बाटो रोक्नु भने हुँदैन ।
पूँजी नथपे आयोजना नै पूरा हुँदैन । आयोजना पूरा नभए बिजुली विक्री हुने कुरै भएन । बिजुली नै विक्री नगरी लाभांश कताबाट वितरण गर्ने ?
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा नसोचिएका समस्या आउँछन् । खासगरी भौगोलिक बनोटले गर्दा सुरुङ बनाउँदा नयाँ समस्या देखा परेर थप लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । निर्माणकै क्रममा प्राकृतिक र मानवीय कारणले पनि लगानी थप्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्ता समस्या थपिएपछि पहिले अनुमान गरिएको लागतभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समस्यालाई कम्पनीले साधारणसभामा प्रस्तुत गरेर शेयरधनीहरूले पूँजी थप्न सहमति दिएको अवस्थामा समेत निर्देशिकाले थप पूँजी उठाउन रोक्ने देखिन्छ ।
शेयरधनीहरू इक्विटी थप्न तयार हुन्छन् किनभने लागत बढ्दा पनि कम्पनीले राम्रै आय आर्जन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । थप इक्विटीका लागि कि त हकप्रद शेयर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ कि त एफपीओ । तर, निर्देशिकाले कम्पनी सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष पूरा भएको र शेयर जारी गर्दाको विवरणपत्र अनुसार लाभांश वितरण गरिसकेको भए मात्रै थप शेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय वा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको हकमा यो व्यवस्था ठीकै हुन सक्छ । तर, जलविद्युत् जस्तो लाभांशका लागि धेरै समय कुर्नुपर्ने तथा ठूलो लागत चाहिने क्षेत्रमा व्यावहारिक हुँदैन । पूँजी नथपे आयोजना नै पूरा हुँदैन । आयोजना पूरा नभए बिजुली विक्री हुने कुरै भएन । बिजुली नै विक्री नगरी लाभांश कताबाट वितरण गर्ने ? जलविद्युत् आयोजनाहरूले बैंकस“ग ऋण लिएका हुन्छन् । थप ऋण लिन पनि इक्विटी नबढाई सम्भव हु“दैन । निर्देशिकाका प्रावधानले गर्दा थप ऋण लिने बाटो नै बन्द हुन्छ । त्यसैले यो निर्देशिकाका प्रावधानमा संशोधन गर्नैपर्छ ।
विद्युत् नियमन आयोग बनेको करीब १ महीना भएको छ । धितोपत्र बोर्डले विद्युत् क्षेत्रको आईपीओ वा एफपीओ जारी गर्न आयोगको स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ । नेपालको शेयर बजार नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय भए पनि जलविद्युत् क्षेत्रको नियामक नहुँदा समस्या भएको थियो । कतिपय कम्पनीले साधारणसभा नै नगर्ने तथा कम्पनीपिच्छे फरक फरक ढंगमा वार्षिक लेखा विवरण बनाउने जस्ता कारणले यो क्षेत्रको दोस्रो बजारप्रति लगानीकर्ता आशंकित बनेका बनिरहेका छन् । यही कारण कतिपय कम्पनीको आईपीओ नै विक्री गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । कतिपय कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूले बेइमानी नै गरेको आरोप समेत लागेको छ । यसलाई नियमन गर्न जरुरी भइसकेको थियो । तर, यसलाई नियमन गर्ने नाममा आयोजना नै बन्न नसक्ने खालको प्रावधान राख्नुचाहिँ उपयुक्त हुँदैन । अहिले निजीक्षेत्रले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिको कारण यही हो ।
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन विशेष जोड दिएको छ । तर, जबसम्म स्वदेशी लगानीकर्ताले प्रशस्त लगानी गर्दैनन् विदेशी लगानीकर्ताले लगानी ल्याउने सम्भावना निकै कम हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै हतोत्साह पार्ने खालको प्रावधान नसच्याउने हो भने न त स्वदेशी लगानी बढ्छ न विदेशी लगानी नै भित्रिन सक्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्देशिकाका प्रावधान सच्याइनुपर्छ ।